Izindaba - Intambo Welding Process Intro
I-SMAW (Shielded Metal Arc Welding) ivame ukubizwa ngokuthi yi-welding stick. Ingenye yezinqubo zokushisela ezithandwa kakhulu ezisetshenziswa namuhla. Ukuthandwa kwayo kungenxa yokuguquguquka kwenqubo kanye nobulula kanye nezindleko eziphansi zemishini nokusebenza. I-SMAW ivame ukusetshenziswa ngezinto ezifana nensimbi emnene, i-cast iron nensimbi engagqwali.
Isebenza kanjani i-Stick Welding
Ukushisela induku yinqubo yokushisela i-arc yesandla. Kudinga i-electrode esetshenziswayo efakwe ukugeleza ukubeka i-weld, futhi amandla kagesi asetshenziselwa ukwakha i-arc kagesi phakathi kwe-electrode nezinsimbi ezihlanganiswayo. Amandla kagesi angaba amandla ashintshanayo noma amanje aqondile avela ekunikezelweni kwamandla kagesi wokushisela.
Ngenkathi i-weld ibekwa, ukumboza kwe-electrode kuyabhidlika. Lokhu kukhiqiza imiphunga enikeza igesi evikelayo nongqimba lwe-slag. Kokubili igesi kanye ne-slag kuvikela i-weld pool ekungcoleni komkhathi. I-flux futhi isebenza ukwengeza ama-scavenger, ama-deoxidizers, kanye nezinto zokuhlanganisa izinsimbi zensimbi.
Ama-electrode Afakwe I-Flux
Ungathola ama-electrode aboshwe ngokugeleza ngobubanzi obuhlukahlukene nobude. Imvamisa, lapho ukhetha i-electrode, ufuna ukufanisa izakhiwo ze-electrode nezinto ezisisekelo. Izinhlobo ze-electrode ezifakwe i-flux zifaka phakathi ithusi, i-aluminium bronze, insimbi emnene, insimbi engagqwali, ne-nickel.
Ukusetshenziswa Okuvamile Kwe-Stick Welding
I-SMAW ithandwa kakhulu emhlabeni wonke ukuthi ilawula ezinye izinqubo zokushisela embonini yokulungisa nokugcina. Futhi iyaqhubeka nokusetshenziswa kabanzi ekwakhiweni kwezimboni nasekwakhiweni kwezakhiwo zensimbi, yize i-flux-cored arc welding iya ngokuthandwa kulezi zindawo.
Ezinye Izici Zokushisela Ngokunamathela
Ezinye izici ze-Shielded Metal Arc Welding zifaka:
Inikeza konke ukuguquguquka kwesimo
Akuzweli kakhulu emoyeni nasemidwebo
Ikhwalithi nokubukeka kwe-weld kuyahluka ngokuya ngamakhono we-opharetha
Imvamisa iyakwazi ukukhiqiza izinhlobo ezine zamalunga ashiselwe: ijoyini le-but, ilunga elihlangene, i-T-joint kanye ne-fillet weld